theZOMI: Burma News International - April 26, 2013
Burma News International - April 26, 2013
Burmese military launching two parallel campaigns
Not only is the Burma Army stepping upamilitary campaign against the Shan State Army (SSA) in central Shan State, it has also started another one further north on the Chinese border against the Kachin Independence Army (KIA) since 19 April, according to reports coming from northern Shan State.
Chinese petrochemicals giant, Sinopec, has agreed to sell 30 percent of its share in an onshore oil block in Myanmar to Taiwan’s CPC Corp, according to industry media and Reuters.
Rakhine Commission submits report
Protest against the Burmese Government’s peace delegation in New York
The Burmese community in New York, USA, stagedaprotest on Sunday against the Burmese Government’s Peace Delegation led by U Aung Min in front of the UN building in New York demanding the release of student leader Ray Min Oo, said Ko Tint Way who is an organizer of the protest.
ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာကိစ္စများဆွေးနွေးရန် ကရင်ဒုက္ခသည်ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဖားအံသို့ထွက်ခွာ
ကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်လွင်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဒုက္ခသည်ဆိုင် ရာကိစ္စများကို ဆွေးနွေးရန် ကရင်ဒုက္ခသည်ကော်မတီ(KRC) ဥက္ကဌ စောရောဘတ်ထွေးနှင့် ဒုက္ခသည် စခန်း ကော်မတီဝင် နှစ်ဦးတို့သည် ဖားအံမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟု KRC မှ ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယိုယွင်းပျက်စီးနေသော ရခိုင် ပုဇွန်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြ ဆွေးနွေးမည်
တချိန်က နိုင်ငံတော် ၀င်ငွေကိုသာမက ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပါ အထိုက်အလျှောက် ဆောင်ကြဉ်း ပေးခဲ့သော ရခိုင်မှ ပုဇွန်မွေးမြုရေးလုပ်ငန်း ထိခိုက်ပျက်စီးနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး နောက်လာမည့် မြန်မာ နိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် အစည်းအဝေးတွင် ရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တင်ပြဆွေးနွေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
အစိုးရတပ်ဖွဲ့များသည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တပ်မဟာ (၄) ၊ လက် အောက်ခံ တပ်ရင်း (၁၇) စခန်းဖြစ်သော မနောဘွမ်စခန်းကို (၃) ရက်ကြာ တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်လိုက် ကြောင်း KIA အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ကရင် ရိုးရာစာပေဖေါ်ထုတ်ရေး သင်တန်းကို ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့နယ် ဆုံစည်းမြိုင် ကျေးရွာ၌ သင်တန်းသား (၂၀၀) ကျော်နှင့်အတူ ယနေ့ ကျင်းပခဲ့သည်ဟု ကရင်စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ဖြန့်ပွားရေးဥက္ကဌ စောဘတိုး ကဆိုပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဇီးလွန် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် သုံးစွဲရန် ရေ အခက်အခဲ ကြုံနေရကြောင်း သိရသည်။
စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် မတင်သောကြောင့် လက်ပံတောင်းဒေသခံများကို တရားစွဲမည်ဟု ခရိုင်ရဲမှူးကြီးပြော
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အတွင်းရှိ လယ်ယာမြေများကို ဝင်ရောက်ထွန်ယက်ရာမှ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ၃ ဦးအား ပြန်လွတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသော ဒေ သခံများမှာ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် မတင်သောကြောင့် ဥပဒေအရ တရားစွဲသွားမည်ဟု မုံရွာခရိုင်ရဲမှူးကြီး ဦးတင်ထွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောဆိုသည်။
ဒုက္ခသည်များအတွက် KOICA မှ ယာယီတဲ ၆၄၀ လုံး ကူညီထောက်ပံ့ ပေးမည်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ရောက်ရှိနေကြသော ဒုက္ခသည် များအတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံရေး အေဂျင်စီမှ ယာယီတဲ ၆၄၀ လုံးကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း KOIC ( Korea International Cooperation Agency ) မှ စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ ဒေါ်ကေသီခိုင် က ပြောကြားသည်။
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့၌ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ခေါ် ကျားခေါင်း ပါတီက မြို့နယ် ပါတီရုံးခွဲကို ယနေ့ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း တက်ရောက်သူလူငယ် များကပြောပါသည်။
သျှမ်း/မြောက်တွင် ရွှေဂက်စ်ပိုက်ပေါက်၊ လယ်သမားများစိုးရိမ်နေ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်ပြည်သို့ သွယ်တန်းသည့် ဂက်စ်နှင့် ရေနံစိမ်း ပိုက်လိုင်းအလွှတ်များတွင် အပေါက် တွေ့နေရသဖြင့် ဒေသခံလူထုတို့ စိုးရိမ်နေကြကြောင်း နမ့်ခမ်းမြို့ခံများကပြောသည်။